AT&T နှင့် LiveU သတင်းများနှင့်အားကစားအသံလွှင့်မှုများအတွက် 5G တွင်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AT & T နှင့်တိုက်ရိုက်သတင်းနှင့်အားကစားဆိုင်ရာထုတ်လွှင့် 5G အပေါ် LiveU အဖွဲ့ Up ကို
ထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်မှုစတင်ပြေးလွှားနှင့်အားကစားအဖွဲ့အစည်းများမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကိုချိုးဖောက်သတင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များကယ်မနှုတ်ရပေမည်။ 5G, နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများကိုဗီဒီယိုစစ်ဆင်ရေးအသွင်ပြောင်းထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး options များရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်အလားအလာပေးထားပါတယ်။ AT & T က * နှင့် LiveU ခရီးဆောင်ဂီယာဖြေရှင်းချက် bonding (High အသုံးဗီဒီယို Coding) LiveU ရဲ့ HEVC မှ 5G ရောက်စေဖို့အတူတူအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ကျနော်တို့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာသက်ရောက်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ 5G နည်းပညာ LiveU HEVC ခရီးဆောင်ထုတ်လွှင့်ယူနစ်ကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ရှိသည်နိုင်စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
LiveU 130 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက် newsgathering များအတွက်အွန်လိုင်းတီဗီများအတွက်ဖြေရှင်းချက် streaming ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုက်ရိုက်ဗီဒီယို, မိုဘိုင်း, နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားနှင့်ဖြစ်ရပ်များလွှမ်းခြုံပေးသည်။ HEVC ဘွန်းနှင့် 5G စွမ်းရည်များ၏ပေါင်းစပ်ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အောက်ပိုင်းအောင်းနေချိန်လယ်ပြင်၌ရှိသောနှင့်အနာဂတ် LiveU ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်များအတွက် features တွေတိုးမြှင့်ဂတိတော်များ၏အားသာချက်ယူ LiveU ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းခွင့်ပြုပါရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
ကျောပိုးအိတ်ထဲကနေစမတ်ဖုန်းငှါ၎င်း, ဂြိုဟ်တုဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက် antenna မှ / ဆယ်လူလာစပ်, LiveU နီးပါးဘယ်နေရာကနေမဆိုသွားလာရင်းအရည်အသွေးမြင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လွှင့်, ကိုဖမ်းယူစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့အကြောင်းအရာဖန်တီးသူနိုင်ပါတယ်။ LiveU HEVC ခရီးဆောင်ယူနစ်လက်ရှိတွင် AT & T ကရဲ့ 4G LTE ကွန်ယက်အပါအဝင်ဗွီဒီယိုကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့အတွက်အတူတကွမျိုးစုံဆယ်လူလာကွန်ရက် bonds တဲ့မူပိုင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ဤကဲ့သို့သောက Wi-Fi ကိုကဲ့သို့သောအခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာများပူဇော်နှင့် ဂြိုဟ်တု.
"24 နာရီသတင်းသံသရာ၏လောကဓာတ်၌, ပရိသတ်တွေမှလျင်မြန်စွာကိုချိုးဖောက်သတင်းရတဲ့အရေးကြီးသောဖြစ်ပါတယ်" ဟုမို Katibeh, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိ, AT & T ကစီးပွားရေးကဆိုသည်။ အဖြစ်ကသူတို့ကိုစားသုံးသူနှင့်အတူဆွဲဆောင်မှုအသစ်သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမော်ဒယ်များဖန်တီးကူညီရန် - "သူတို့ရဲ့ခရီးဆောင် HEVC ထုတ်လွှင့်ယူနစ်နှင့်အတူရုံးတင်စစ်ဆေး 5G မှ LiveU အတူတက် teaming အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်နှင့်အနာဂတ်တီထွင်မှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုချဲ့ထွင်ကိုကူညီနိုင်ပုံကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ထုတ်လွှင့်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ 8K ဒါမှမဟုတ်မိုဘိုင်း 360G ကျော်တစ်ဦး AR / VR5format နဲ့စီးကိုချိုးဖောက်သတင်းအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ "
"ကျနော်တို့က, အထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးပါတိုးသတင်းကိုချိုးဖောက်လမ်းကိုနှောင့်ယှက်အဖြစ် 5G တွေ့မြင်အားကစားအသက်ရှင်နှင့်အခြားတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့နည်းပညာထိုကဲ့သို့သောအသံမျိုးစုံကိုလိုင်းများ, တစ်ခုတည်းခရီးဆောင်ဂီယာဖြေရှင်းချက် 4K streaming များနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုပြန်လာထံမှ multicamera ဘဏ်ဍာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပိုမိုစွမ်းရည်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်မျှော်လင့်, "Avi Cohen ကို, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စစ်ဆင်ရေးအရာရှိချုပ်များနှင့်တွဲဖက်တည်ထောင်သူကပြောပါတယ် LiveU ။ "AT & T ကစားသုံးသူနဲ့ content ဖန်တီးသူ၏ဖြစ်ပေါ်နေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်ဖြေရှင်းချက်ပို့ပေါ်မှာအာရုံစိုက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ AT & T ကအတူပူးပေါင်း 5G ဖွသမျှသောဖြစ်နိုင်ခြေ၏အားသာချက်ယူထူးခြားသော features နဲ့ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပေးဖို့ LiveU ရဲ့ကတိကဝတ်ပြသသည်။ "
တိုက်ရိုက်ကဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ၏ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေမြှင့်တင်ရန်အတွက် AT & T က Foundry အတွက် 5G စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာစူးစမ်းဖို့ AT & T နှင့် LiveU အစီအစဉ်။
"ဒီ LU600 HEVC ယူနစ်အမြင့်ဆုံးသောဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်ဘစ်နှုန်းစျေးကွက်အတွက်အလျင်မြန်ဆုံးဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်း, နိမ့်ဆုံးနှောင့်နှေးကယ်တင်တတ်၏။ အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် 5G ၏အမြန်နှုန်းနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သော, ထိုနည်းပညာများကိုနောက်ထပ်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှောင့်အယှက်ရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းနေကြတယ် "ဟု Cohen ကိုကဆက်ပြောသည်။
4K 5G ဆယ်လူလာကပ်လျက်တည်ရှိ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဆယ်လူလာ Bond ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HEVC isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော သတင်း SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows အားကစား က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-05-01
ယခင်: DigiBox နှင့် Stream7 ဖုံး SQLBits ညီလာခံ
နောက်တစ်ခု: စတူဒီယို Technologies ကမိတ်ဆက်သည့်မော်ဒယ် 207 ၎င်း၏ပထမဦးဆုံးအီလက်ထရောနစ်အားကစား-Specific အသံကုန်ပစ္စည်း